‘निगम प्रभावकारी बनाउन नाट्टाको प्रतिनिधित्व’ | गृहपृष्ठ
Home बजार ‘निगम प्रभावकारी बनाउन नाट्टाको प्रतिनिधित्व’
माघ १३, काठमाडौं (अस)। नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेण्ट्स (नाट्टा)को प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ । नाट्टाको १८औं राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४७औं वार्षिक साधारणसभामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा नाट्टाले खेलेको भूमिकाको सराहना गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । उनले नेपाल पर्यटन वर्ष२०११ लाई दृष्टिगत गरी चिनियाँ पर्यटकलाई भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाको तयारी गर्न सरकार जुटिरहेको समेत जानकारी दिए ।
नाट्टाका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद शर्माले राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानविनाको पर्यटन वर्षको सफता चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याए । शर्माले पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा पुरानो र जिम्मेवार संस्थाको नाट्टाको भूमिका निगममा नदेखिएको भनेपछि मन्त्री भण्डारीले नाट्टालाई पनि निगममा प्रतिनिधित्व गराउने घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना उच्च रहेको उल्लेख गर्दै रोजगारी सृजनालाई पनि पर्यटनको क्षेत्रले नै बढावा दिन सक्ने बताए । पर्यटनको माध्यमबाट आगामी २० वर्षमा विश्वका १ अर्ब ६० करोड पर्यटकबाट हरेक २ मिनेट २ सेकेण्डमा एक व्यक्तिले पर्यटनक्षेत्रमा रोजगारी पाउने तर्क उनले राखेका थिए ।
नेपाली उद्योगले मात्र अर्थतन्त्रलाई थेग्न नसक्ने भन्दै उद्योगी एवम् सभासद् राजेन्द्र खेतानले अबको अर्थतन्त्रको भविष्य पर्यटनसँग गाँसिएको उल्लेख गरे । उनले धार्मिक पर्यटनमा हिन्दूधर्मका मठमन्दिर र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका साथै नेपालको प्राकृतिक पर्यटनलाई प्रमुख सम्भावनाको क्षेत्रमा राखी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाललाई साहसिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सरकारले विभिन्न खेल पर्यटनको विकास गर्न लागेको पर्यटन सचिव किशोर थापाले बताए । उनले नेपाल परम्परागत पर्यटनमा मात्र सीमित नरही नयाँ-नयाँ गन्तव्यको विकासमा लाग्न जरुरी रहेको समेत औंल्याए ।
अनुसन्धान केन्द्र खोल्दै देउराली-जनता फर्मास्युटिकल्स
माघ १३, काठमाडौं । औषधि उत्पादनमा अग्रणी देउराली-जनता फर्मास्युटिकल्सले ‘अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र’ औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताएको छ । कम्पनीले २०औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर सो केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । बिहीवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले यही माघ १६ गतेबाट अनुसन्धान केन्द्र औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने बताए । काठमाडौंको धापासीमा २० हजार वर्गफिटमा निर्माण गरिएको सो केन्द्रका लागि करीब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागेको उनले जानकारी दिए ।
हाल यस कम्पनीले १ सय २० प्रकारका औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले सञ्चालनमा आउन लागेको केन्द्रबाट औषधिसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । ‘अत्याधुनिक उपकरणयुक्त केन्द्रको माध्यमबाट नेपालमा औषधि विकासको क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान गर्न सकिन्छ,’ शर्माले भने, ‘गुणस्तरीय औषधिको उत्पादनका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
अन्तरराष्ट्रियस्तरका उच्च प्रविधिको आयात गरी नेपालमा औषधि उत्पादन गर्दै आएको यस कम्पनीले आईएसओ १४००१ तथा आईएसओ ९००१ र डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेको बताइएको छ । कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार कम्पनीले यसै वर्षदेखि छालारोगमा प्रयोग हुने औषधि बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । हाल यस कम्पनीसँग १ सिफ्ट १० लाख लिटर झोल औषधि, १० करोड टयाबलेट, ७ करोड २० लाख क्याप्सुल, ३ लाख ड्राई सिरप र १ करोड क्रीम एकैसाथ उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको बताइएको छ ।
एनसीसीद्वारा बीमा रकम हस्तान्तरण
माघ १३, काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्कले विभिन्न दुर्घटनामा मृत्यु भएका निक्षेपकर्ताका परिवारलाई बीमा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । बैङ्कले सिन्धुपाल्चोकको राम्चे-७ का फौदसिंह थापाका परिवारलाई रू.३ लाख र माखा-५ की कान्छी तामाङका परिवारलाई रू.३ लाख २४ हजार गरी रू. ६ लाख २४ हजारबराबरको बीमा रकम हस्तान्तरण गरेको हो । सो रकम बाह्रबीसे गाविसका सचिव भगवान थापा र एनबी इन्स्योरेन्सका मुख्य प्रबन्धक विक्रान्त पाण्डेले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका थिए ।
फौदसिंह थापाको उच्च विद्युत् प्रवाहका कारण करेण्ट लागेर र कान्छी तामाङको बस दुर्घटनामा परी केही महीनाअघि मृत्यु भएको थियो । उनीहरूको एनसीसी बैङ्कमा बचत खाता रहेको थियो । बैङ्कले हाल व्यक्तिगत बचतकर्तालाई रू.१० हजारसम्मको औषधोपचार बीमा र रू.५ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैङ्कको प्रधान कार्यालय सिध्दार्थनगर भैरहवामा तथा कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौंको बागबजारमा रहेको छ । हाल बैङ्कका १७ ओटा शाखा सञ्चालनमा छन् । बैङ्कले चालू आवभित्रैमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी थप ६ ओटा शाखा खोल्ने बताएको छ ।
बिजनेश डेभलपमेण्ट बैङ्क नारायणगढमा
बिजनेश डेभलपमेण्ट बैङ्कले चितवनको नारायणगढमा शाखा खोलेको छ । बैङ्कको यो पाँचौं शाखा हो । उक्त शाखाको उद्योग वाणिज्य सङ्घ नारायणगढका अध्यक्ष उत्तमलाल चुके, पत्रकार महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष कृष्ण गिरी, नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके, पोल्ट्री व्यवसायी मञ्च चितवनका अध्यक्ष टीका पोखरेल र मारवाडी सेवा समिति नारायणगढका उपाध्यक्ष सुरेशकुमार राठीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे । बैङ्कका अध्यक्ष नरेशशङ्कर पालिखेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज पराजुलीले बैङ्कको गतिविधिका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । बैङ्कका यसअघि तनहुँको दमौली, पोखराको न्यूरोड, बिरौटा र बुद्धचोकमा शाखा सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू.६९ करोड ६० हजार रहेको छ । हाल यो बैङ्क राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्कमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा छ । नारायणगढ शाखाबाट बैङ्कले सेमी-फिक्स निक्षेप योजना र निश्चित रकमका मुद्दती निक्षेपहरूमा निःशुल्क हिराको औंठी प्रदान गर्ने योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो योजना सीमित सङ्ख्यामा सीमित अवधिका लागि मात्र रहेको बताइएको छ । बैङ्कले हालै सिटिजन्स बैङ्क इण्टरनेशनलसँग सम्झौता गरी उक्त बैङ्कका नेपालभरका शाखाबाट निक्षेप राख्न र झिक्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । बैङ्कको चालू आवको पुसमसान्तमा रू. १ अर्ब ७१ करोड निक्षेप सङ्कलन र रू. १ अर्ब ६१ करोड कर्जा लगानी रहेको छ । बैङ्कको हालको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । बैङ्कले चालू आवको पुसमसान्तसम्ममा रू. ६ करोड ४४ लाख सञ्चालन नाफा गरेको बताएको छ ।
साइन डेभलपमेण्ट बैङ्कको साधारण शेयर
रूपन्देहीको बुटवलमा प्रधान कार्यालय रहेको साइन डेभलपमेण्ट बैङ्कले रू. १ सय दरका ८ लाख कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने भएको छ । यसका लागि काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित ग्रोमोर मर्चेण्ट बैङ्कर लिमिटेडलाई शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरिएको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । शेयर निष्कासनसम्बन्धी सम्झौतामा साइन डेभलपमेण्ट बैङ्कका तर्फाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेल तथा शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकका तर्फाट महाप्रबन्धक कवीन्द्रध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
२०६५ फागुन ११ गतेबाट बैङ्किङ कारोबार शुरू गरेको यस बैङ्कले स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर नाफा गर्दै आएको बताएको छ । चालू आवको पुसमसान्तसम्ममा रू.२ करोडभन्दा बढी सञ्चालन नाफा गरेको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले जानकारी दिएका छन् । बैङ्कको चालू आवको पुसमसान्तमा रू. १ अर्ब ६६ लाख निक्षेप सङ्कलन र रू.७५ करोड ३८ लाख कर्जा प्रवाह रहेको थियो । बैङ्कका केन्द्रीय कार्यालयसहित अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, रूपन्देहीको योगीकुटी र मङ्गलापुर गरी तीनओटा शाखा कार्यालय तथा अर्घाखँचीको चुत्राबेँशी र रूपन्देहीको ज्योतिनगर करहियामा दुइओटा एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा छन् । बैङ्कले निकट भविष्यमा नवलपरासीको भूमही र रूपन्देहीको रुद्रपुरमा थप दुइ शाखा खोल्ने बताएको छ । हाल बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू.१२ करोड रहेको छ । सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गरेपश्चात् बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. २० करोड पुग्ने बताइएको छ । शेयर निष्कासनपश्चात् बैङ्कले हालको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी १० जिल्लामा विस्तार गर्ने बताएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैङ्क कास्कीको नयाँपुलमा
मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले कास्कीको सल्यान गाविसस्थित नयाँपुलमा शाखा खोलेको छ । सो शाखाको बिहीवार बैङ्कका अध्यक्ष खगेन्द्रराज रेग्मीले उद्घाटन गरे । सो अवसरमा पूर्वसांसद् शुक्रराज शर्मा, सल्यान गाविसका निर्वतमान अध्यक्ष पोषनाथ शर्मा, सञ्चालक मीनप्रसाद गुरुङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकाललगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । उक्त शाखाले कृषि, पर्यटन र लघु उद्यमलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताएको छ । आधुनिक, ग्रामीण बैङ्किङ एवम् लघु बैङ्किङ एकै साथ सञ्चालन गर्दै आएको यस बैङ्कका ३५ शाखा सञ्चालनमा छन् । बैङ्कले रू. ७ करोडबराबरको साधारण शेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता गरेको जानकारी दिएको छ ।
सानिमाको हकप्रद शेयर बाँडफाँट
सानिमा विकास बैङ्कले रू.१ करोड २० लाख ९६ हजार कित्ता हकप्रद शेयरको बाँटफाँट गरेको छ । बैङ्कले स्तरोन्नति गरी वाणिज्य बैङ्कमा परिणत हुने प्रक्रियामा साविकका शेयरधनीका लागि गत मङ्सिर ९ देखि पुस १९ गतेसम्म हकप्रद शेयर खुला गरेको थियो । सो अवधिमा शेयरधनीहरूले माग गरेबमोजिमको हकप्रद शेयरको बाँडफाँट गरेको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । उक्त हकप्रद शेयर बाँडफाँटपश्चात् बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब ८३ लाख पुगेको छ । बैङ्कले गत त्रैमासमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा निक्षेपमा ८ दशमलव ५७ प्रतिशतले वृद्धि गरी रू. ६ अर्ब ७३ करोड र कर्जा तथा सापटमा १२ दशमलव ९४ प्रतिशतले वृद्धि गरी रू. ६ अर्ब २१ करोड पुर्याएको छ । चालू आवको पहिलो ६ महीनामा बैङ्कको सञ्चालन नाफा रू. ६ करोड ८० लाख पुगेको बताइएको छ ।
मध्यपश्चिम ग्रामीण विकास बैङ्क रुकुममा
मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैङ्कले रुकुमको खलङ्गामा शाखा खोलेको छ । सो शाखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेणीमाधव ज्ञवालीले बिहीवार उद्घाटन गरे । सो अवसरमा बोल्दै ज्ञवालीले बैङ्किङ र वित्तीय क्षेत्रमा रुकुमेली जनतालाई सहज र सुलभ रूपमा सेवाप्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लघुवित्त सेवा प्रदान गरी जनताको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त शाखा खोलिएको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । मध्यपश्चिममा कार्यक्षेत्र रहेको यस बैङ्कका १० जिल्लामा ३० ओटा शाखा छन् । बैङ्कको रुकुम जिल्लामा खोलिएको यो दोस्रो शाखा हो । यसअघि बैङ्कले चौरजहारीमा शाखा खोलेको थियो । बैङ्कले सो शाखाबाट सामूहिक कर्जामा १५ हजारदेखि ९० हजारसम्म र धितो कर्जामा २ लाखसम्म ऋण लगानी गर्ने बताएको छ ।
सोनीका नयाँ हयाण्डीक्याम बजारमा
नेपालका लागि सोनीको आधिकारिक विक्रेता नेपा हिमा ट्रेडलिङ्क प्रालिले विवाहमौसमलाई लक्षित गरी नयाँ ह्याण्डीक्याम क्यामरा बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले एचडीआर तथा डीसीअआर सिरिजका विभिन्न क्यामरा बजारमा ल्याएको छ । उच्च रिजोलुसन्सका यी क्यामराले कम उज्यालोमा पनि उच्च गुणस्तरका तस्वीर खिच्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ । रू. ६१ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ पर्ने एचडीआर सीएक्स १५० क्यामरामा २ दशमलव ७ इञ्चको एलसीडी स्क्रीन र १६ जीबीको मेमोरी कार्ड रहेको छ । त्यसै गरी ३ दशमलव ५ इञ्चको एलसीडी स्क्रीन रहेको एचडीआर सीएक्स ५५० को मूल्य रू. १ लाख २४ हजार ९ सय ९९ रहेको छ । यसमा ६४ जीबीसम्मको मेमोरी कार्य प्रयोग गर्न सकिन्छ । ३२ जीबीसम्मको मेमोरी रहेको एचडीआर सीएक्स ३५० को मूल्य ८९ हजार ९ सय ९९ रहेको छ भने २ सय ४० जीबीसम्मको मेमोरी तथा ३ दशमलव ५ एञ्च एलसीडी स्त्रिmन भएको एचडीआर सीएक्स ५५० को मूल्य १ लाख २८ हजार ९ सय ९९ रहेको छ । यी क्यामराको खरीदमा क्यामरा ब्याग तथा अतिरिक्त ब्याट्री सित्तैमा दिइने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी कम्पनीका डिसीआर सिरिजका विभिन्न क्यामराको मूल्य २९ हजार ९ सय ९९ देखि ५४ हजार ९ सय ९९ सम्म रहेको छ । यी क्यामराहरू सोनीका आधिकारिक विक्रेतामार्फत बजारमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
बर्दिया कृष्णसार पर्यटन महोत्सव हुँदै
‘बर्दिया कृष्णसार पर्यटन महोत्सवको अभियानः बर्दियाको विशेषता, मौलिकता र सम्भावनाको पहिचान’ भन्ने मूल नाराका साथ फागुन ११ गतेदेखि २० गतेसम्म प्रथम बर्दिया कृष्णसार महोत्सव हुने भएको छ । बिहीवार नेपाल पर्यटन बोर्डमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुराको जानकारी दिइएको हो । पर्यटन वर्षको अवसर पारेर बर्दियामा रहेका प्राकृतिक सम्पदाको प्रचार-प्रसार गर्न महोत्सवको आयोजना गरिएको महोत्सवका संयोजक अमरबहादुर खड्काले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रसमिति, कृषि विकास कार्यालय र उद्योग वाणिज्य सङ्घ बर्दियाले महोत्सवको आयोजना गरेका हुन् ।
बर्दिया क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा धनी रहेको तर यसको समुचित विकासको अभावमा सोचेजति विकास हुन नसकेको कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरे । बर्दियामा रहेका प्राकृतिक सम्पदाको विकासमा ध्यान दिन संयोजक खड्काले सरकारसमक्ष आग्रह गरे । विश्वकै दुर्लभ पाटेबाघ, एशियाकै ठूलो हात्ती राजागज, एकसिङ्गे गैँडा , कृष्णसार, ४ सय ३८ प्रजातिका चरा, विभिन्न धार्मिकस्थललगायत महोत्सवमा प्रमुख आकर्षण रहने आयोजकले जानकारी दिएका छन् । यी आकर्षण अवलोकन गर्न महोत्सवमा यातायातको समेत सुविधा उपलब्ध गराउने बताइएको छ । महोत्सवमा स्थानीय कलासंस्कृति तथा रीतिरिवाज झल्किने कार्यक्रम रहेकाले महोत्सवबाट पर्यटकले पूर्ण मनोरञ्जन लिनसक्ने संयोजक खड्काले बताए ।
महोत्सवमा पर्यटन, उद्योग, लद्यु उद्यम, कृषि, शीप र प्रविधिलगायत २ सय ५ प्रदर्शनीकक्ष रहने छन् । महोत्सव प्रवेशशुल्क रू. ३० र विद्यार्थीका लागि छूटको व्यवस्था रहेको बताइएको छ । महोत्सवमा करीब २ लाख अवलोकनकर्ता आउने र ४ करोडको कारोबार हुने अपेक्षा आयोजकको रहेको छ ।
भीम उद्योगका चप्पल पश्चिमका सबै जिल्लामा
दाङको घोराहीस्थित भीम राप्ती रबर उद्योगले उत्पादन गरेका चप्पल पश्चिम नेपालका सबै जिल्लामा विक्री हुन थालेका छन् । उद्योगले गत असोज ४ गतेदेखि उत्पादन शुरू गरेको हो । शुरूका चरणमा उद्योगले राप्ती अञ्चलमा मात्रै विक्री गर्दै आएकोमा हाल आएर पश्चिम नेपालका सबै बजारमा विक्री गर्न शुरू गरेको छ । राप्तीमा व्यापारीहरू र अन्य जिल्लामा अधिकृत विक्रेतामार्फत चप्पल विक्री गर्न थालिएको उद्योगका सञ्चालक मदन केसीले बताए । अहिले मुख्य गरेर बुटवल, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर, धनगढी, सुर्खेतलगायत शहरमा चप्पल विक्री गर्न थालिएको छ ।
करीब २ करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना गरिएको यो उद्योग मध्य तथा सुदूरपश्चिमकै पहिलो भएको सञ्चालक केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योगले दैनिक सरदर १ हजार ५ जोर चप्पल उत्पादन गरिरहेको छ । दैनिक ३० हजारभन्दा बढीको चप्पल विक्री गर्ने उद्योगले अबको केही समयभित्र आफ्नो उत्पादन बढाउने जानकारी दिएको छ । अन्यत्रको भन्दा कम मूल्यमा बाटा चप्पल विक्री गरिरहेको उद्योगले केही समयभित्रै अन्य प्लाष्टिकका चप्पल पनि उत्पादन गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । ‘बजारमा ७० देखि ८० रुपैयाँमा विक्री हुने चप्पललाई हामीले ६० रुपैयाँमा विक्री गरिरहेका छौं,’ सञ्चालक केसीले भने । उद्योगले चप्पल उत्पादन शुरू गरेपछि यसअघि काठमाडौं, हेटौँडा र वीरगञ्जबाट ल्याई विक्री हुँदै आएका बाटाका चप्पलमा धेरै कमी आएको छ ।